» ओलीबाट धोका पाएपछि विप्लवको सम्पर्क खोज्दै प्रचण्ड !
ओलीबाट धोका पाएपछि विप्लवको सम्पर्क खोज्दै प्रचण्ड !
३० कार्तिक २०७७, आईतवार १०:५५
काठमाडौं । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा एकलौटी र पार्टीमा मनोमानी गर्न थालेको भन्दै पूर्व माओवादीका नेताहरुसँग दुखेसो गर्न थालेका छन् ।
एमालेसँगको पार्टी एकतापछि अध्यक्ष ओलीबाट आफुले धेरै हेपाई, पेलाई र तनावपूर्ण अवस्था झेल्नुपरेको उनको गुनासो थियो । पछिल्लो समय प्रचण्डले आफ्ना सहकर्मी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीको संघिय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराँती लगायतसँग नियमित सम्पर्क बढाइरहेका छन् ।
केही दिनअगाडि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिबन्धित माओवादीका महासचिव नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव सँग समेत सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि विप्लव र प्रचण्डबीच कुराकानी भए नभएको बारे भने स्रोतले खुलाउन चाहेन ।
विप्लव भूमिगत भएपछि पनि प्रचण्ड र विप्लवबीच एकपटक कुराकानी भएको र उक्त कुराकानीमा प्रचण्डले विप्लवलाई नेकपामै आउन आग्रह गरेको तर विप्लवले प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । अहिले चाहिँ प्रचण्डले फरक विषयमा गम्भीर कुराकानी गर्न चाहेको सन्देश विप्लवलाई पठाएका छन् । विप्लवको सम्पर्क सुत्रलाई खुमलटारमै बोलाएर प्रचण्डले उक्त सन्देश पठाएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रचण्डले ओलीसँगको एकता भंग गरी पार्टी फुट्ने अवस्था आएमा पूर्व माओवादीमा रहेका र हाल अन्य पार्टी र अभियानमा सक्रिय सहकर्मीसँग एकता गर्नेसम्मको सोच बनाएका छन् ।
तर, हालकै अवस्थामा नेकपा फु्ट्न भने गाह्रो छ । नेकपामा रहेका पूर्व माओवादी बाहेक माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम गुट पनि प्रचण्डसँगै विभाजनमा जानुपर्ने अवस्था छ । पूर्व एमालेका ओली पक्ष नेताले नेपाल, खनाल र गौतमका कसैलाई पनि प्रचण्डको पछि नलाग्‍न चेतावनी दिन थालेका छन् । साझापोष्टबाट साभार